Kubbaa miilaa Archives - Page 2 of 4 - Walabu Media | Oromo News & Opinions
Home Ispoortii Kubbaa miilaa Page 2
Piriimer Liigii Cheelsiin, La Liigaa Riyaal Maadriid, Shaampiyoonsi Liigii Baarseloonaan akka injifatu qorannoon mul’isa
Admin - Feb 1, 2017
Cheelsii, Man Yu, Arsenaalii fi Man Siitiin moo’atan. Riyaaliifi Baarseloonaan wolmorkii cimatti jiru
Fira - Oct 18, 2015
Manchastar Yunaayitid garaagarummaa Man Siitii wojjiin qabu dhiphisee
Fira - Sep 20, 2015
Cheelsiin Arsenaaliin yoo moo’atu Manchastar Siitiin Weest Hamiin injifatame
Admin - Sep 19, 2015
La Liigaa Ispeenitti Riyaal Maadriid yoo injifatu Baarseloonaan Nu Kaampitti moo’atame
Admin - Feb 23, 2015 0
Taphoota kilaboota La Liigaa Ispeen jiddutti geggeeffameen oduun guddaan torbaan kanaa rifannoota injifatamuu Malaagaa irraa Baarseloonaa mudateedha- sanuu Nuu Kaampitti. Baarsaan 1 – 0...
Taphoota Priimer Liigii Ingiliiz sanbata kana geggeeffame Arsenaaliifi Manchastar Siitiin injifannoon...
Admin - Feb 21, 2015 0
Woldorgommii guyyaa har'aa kilaboota addaddaa priimer Liigii Ingiliiz jiddutti geggeeffameen Arsenaaliifi Manchastar Siitiin yoo injifatan, Manchastar Yunaayitid moo'atame. Cheelsiin morkataa isaa woliin qabxii qoodamuuf...
Ayvoorikoost waancaa Aafrikaa 30ffaa harkatti galfatte
‘Kilabii kee wojjiin yoo injifattu waan raajiidha. Biyya kee wojjiin yoo ta’e ammo waan hinamanamneedha,’ jedhe Yaayaa Turee erga biyyi isaa waancaa Aafrikaa 30ffaa...
Gaanaafi Iyvoorikoost waancaa Aafrikaa 30ffaa harkatti galfachuuf Dilbata dirree seenu
Admin - Feb 6, 2015 0
Jalqabaa kaasee waancaaf nidhihaatan jedhamanii kanneen eeggaman keessa jiru Gaanaafi Iyvoorikoost. Tilmaamni taajjabdootaafi beektota kubbaa miilaa dhugaa ta’ee kunoo gareen lamaanuu morkattoota isaanii hunda...
Arsenaal tapha FA Cup isa marsaa itti aanutti dabre. Cheelsiifi Manchastar...
Admin - Jan 26, 2015 0
Taphoonni torbaan kana biyya Ingiliizitti geggeefaman taphhoota FA Cup dha. Taphoota FA Cup kana irratti hundi hinmoo’anne, hundis qabxii gahaa hinarganne. Kanniin injifatan, marsaa ...
Taphoonni waancaa kubbaa miilaa Aafrikaa (CAF) 30ffaan har’a Ekuwaatooriyaal Giinii keessatti...
Admin - Jan 17, 2015 0
Woldorgommiin dirree Aafrikaa irratti, kubbaa milaan ol’aantummaa argachuuf, woggaa lamatti altokko geggeeffamu har’a eegala. Woldorgommii kana irratti kan hirmaatan biyyota 16 yoo ta’ani, woldorgommiin...
Kiristiyaanoo Ronaaldoon FIFA Ballon d’Or bara 2014 injifate
Admin - Jan 12, 2015 0
Taphattoota 3 turan kan dorgommii Ballon d’Or bara 2014f cuunfamanii dhihaatan: Ronaaldoo, Messiifi Manu’eel Nu’eer turan. Yeroo dheeraadhaaf isa kana, santu injifata jedhamaati mormiifi...
Arsenaal injifate. Cheelsiifi Manchastar lamaan morkattoota isaanii woliin qabxii qooddatan
Admin - Dec 29, 2014 0
Cheelsiin qabxii 3 Priimer Liigii ittiin hoogganaaru tikfachuu danda’e. Kuni erga Cheelsiin Saawuzhamton woliin 1 – 1 gargar bayeeti. Manchastar Siitiin dirree isaa irratti...
Manchastar, Arsenaal, Cheelsii fi Manchastar Siitiin yoo injifatan, Liivarpuul ammas qabxii...
Admin - Dec 14, 2014 0
Taphoota Priimer Liigii torbaan kana geggeeffameen kilaboonni hedduu rukutaman, qabxii gatan Liivarpuuliifi Niwuukaasel Yunaayitid dha. Liivarpuul harka Manchastaritti fundura daawwattoota 75,000 tti kan 3...
Arsenaalii fi Cheelsiin Injifataman; Manchastar Siitiin Cheelsitti dhiphise
Admin - Dec 7, 2014 0
Daqiiqaan afurtanii-shanan jalqabaa Arsenaaliifis ta’ee deeggartoota isaa hundaaf kan rifannootaa, wonti hineegne keessatti raawwate ture. Taphni jalqabeen osoo qajeelatti hinbeekamne kan Piiter Krawuch goolii...